> कोरोना भाइरस एउटा भ्रम मात्र त हैन ?
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १३:१३
भारतमा पनि एक्टिभ केसहरु जम्मा ९७००० छन् यो हेर्दा उनिहरुको समेत प्रत्येक १४००० मा १ जना संक्रमित एक्टिभ छ । हाम्रो जनसंख्याको आधारमा पनि १४००० मा १ जना संक्रमित छ ।
खबर खुराक सम्पादकीय विचार
विश्वनै यतिवेला एउटै कुरामा लडिरहेकाे छ मानिसको स्वास्थ्य कसरी बचाउने भनेर । हाल सम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि संसारका २१५ वटा देशमा फैलिसकेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएर छिट्टै सबै समाधान होला भन्न सकिने अबस्था छैन। आजकाे दिन सम्म आउदा खेरी ६६ लाख बढी यसबाट संक्रमित भएकाे र ३ लाख ७५ हजार बढीकाे निधन भइसकेको पुष्टी भइसकेको अबस्था छ ।
चिनको वुहानबाट गत वर्ष सुरु भएकाे कोभिड १९ अहिले विश्वभरी नै फैलिसकेको हो । यसले विश्वका शक्ति राष्ट्रमात्र भनेने कुनै बाटोले छेकेन जहाँ पनि पुगेर मानिसलाई सताइसकेकाे हामी हेर्न र सुनिरहेकै छौ ।
अब विश्वका कुरा छाडौं हामी नेपालकाे सन्दर्भमा कुरा गरौं नेपाल पनि यो भाइरसबाट अछुतो हुन सकेन सबै भन्दा पहिला चिनबाट फर्केका एक ब्यक्तिमा कोभिड पुष्टि भएकाे थियो ।
करिब त्यसको २ महिना पछि मात्र नेपालमा थप २ जना विदेशबाटै आएका नागरिकमा कोभिड देखियो ।
त्यसका केहि दिन पछि नेपालमा १ जना २ जना गर्दै बड्दै बड्दै गइरेकाे अबस्था छ । आज सम्म आउदा नेपालमा समेत १८०० बढी संक्रमित पुष्टी भइसकेकाे अबस्था छ ।
नेपालमा पहिलो संक्रमित पत्ता लगाउनका लागी परिक्षण समेत नेपालमा हुदैंनथ्यो उनको हङकङमा लगेर कोरोना जाँच गरिएकाे अबस्था थियो उनिमा लक्षणहरु देखिएका थिए उनि केहि दिनमा निको भएर घर फर्के र सामान्य दिनचर्यामा आफ्नो काममा लागे त्यसपछाडी हामीहरु नेपालमा कोरोना नभएको र अब आउन सक्ने तयारीमा समेत थिएनौं ।
उतिवेलाको परिणाम हामी संग आज भोली गर्दै आइरहेकाे अबस्था छ । हाम्रा तयारीहरु कहाँनेर कमिकमजोरी हुँदा देशमा कोरोना संक्रमित हरु फेला परेका हुन् ।
हामी पहिला भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुबाट अशुरक्षित भएकाे महसुस गरेका थियौं तर पछिल्लो समयमा भारतबाट हामीलाई जोखिम भनिरहेका छौं । यो जोखिम छ भन्ने त हामीलाई पहिल्लै त थाहा थियो हामी किन तयारी गरेनौं अब हामी अरु मुलुकलाई दोष दिने भारतमा मात्र हैन हामीकहाँ आउने अन्य तेस्रो देशका नागरिक समेतमा कमजोरी हैन किनकि उनिहरु समेत आयातित भाइरसनै बोकेका हुन न उनको दोष छ न त उनका मुलुकको ।
हाम्रो तथ्याङ्कमा हामी अझैं पनि भारतमा बढी संक्रमित हाम्रोमा कम संक्रमित भनिरहेका छौ । अरे बाबा भारतको जनसंख्याकै कुरा गर्ने र नेपालको तुलना गरौं त अब यो आर्टिकल लेख्दा सम्म भारतमा २ लाख संक्रमित पुगेका छन् भने नेपालमा समेत २ हजार संक्रमित पुगिसकेकाे अवस्था छ यसरी हेर्दा भारतमा ७००० जनामा १ जना संक्रमित छन् भने हाम्रो नेपालमा १४५०० मा १ जना संक्रमित भेट्टिएका छन् यो एक किसिमको दर केही बढी देखिएता पनि एक्टिभ केसको कुरा गर्दा भारतमा पनि एक्टिभ केसहरु जम्मा ९७००० छन् यो हेर्दा उनिहरुको समेत प्रत्येक १४००० मा १ जना संक्रमित एक्टिभ छ ।
यसरी हेर्दा हामी र भारतमा एउटै दरमा संक्रमित छन् हामी भारतमा संक्रमित धेरै हाम्रोमा कम भन्ने अबस्थामा छैनौं यदि कसैलाई भारतमा भन्दा हाम्रोमा कम संक्रमित भन्ने लाग्छ भने त्यो नै भ्रम हो ।
हुनत हाम्रोमा पनि निको हुनेको दर बढ्दो छ । यहाँ पनि अहिलेकाे तथ्याङ्क सम्ममा करिब ३०० जना संक्रमित निको भइसकेका छन् । निको हुने हरुले आफुहरुलाई सामान्य लक्षण समेत नदेखिएकाे बताएका छन् । यो लक्षण नदेखिने पिरामीलाई विरामी भएकाे समेत थाहा नहुने यो कस्तो भाइरस ?
अब कुरा अन्य मुलुकको पनि गरौं समाचारहरुमा जनाइएअनुसारका जानकारीहरु हेर्ने हो भने कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेकाे दर नगन्य हो । हामी यहाँ अन्य मुलुकको भन्दा पनि नेपालको बारेमा केही तथ्यहरु खोजौं
नेपालमा अहिलेसम्ममा कोरोनाका कारण ८ जनाको ज्यान गइसकेको पुष्टि भइकाे छ । त्यसमा पनि सुरुबाटै हामी हेरैं सुरुमा नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुकाे विवरण यस्तो छ
यि सुत्केरीको मृत्यु कोरोनाले भएकाे बताइएपनि उनले कसैमा पनि कोरोना सारेको भेटिएन यदि उनमा कोरोना भएकाे भए उनले कम्तिमा उनकि शिशु अथवा श्रीमान अरु उनलाई स्वार सुसार गर्नेलाई त सर्न पर्ने किन सरेन यो समेत अध्ययनको विषय हो ।
उनको अबस्था पनि कोरोनाका कारण ज्यान गएकाे बताइएकाे छ । उनि पनि १४ दिन लगातार हिडेर भारतबाट आएका हुन् । उनले कति दिन खाना खाएनन् बाटोमा कति दुख पाए उनलाई नेपाल ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राखियो उनको ज्यान वान्ता गर्दा गर्दै गयो हामी कोरोना भन्यौ सकियो । उनको सम्पर्कमा आएका क्वारेन्टाइनका यि लाई कोरोना लायो उनले सारे भन्ने पनि हामी भन्न सकिने अबस्थामा छैनौं ।
उनि पनि रुपन्देहीमा संक्रमित भए वा गुल्मीमा भए केही भन्न सकिने अवस्था छैन यदि उनमा पनि कोरोनानै हो भने किन उनि संग सम्पर्कमा आएकामा देखिएन कित यो भेट हुदैंमा छुदैमा सर्दैन उनकाे त संक्रमण भएकाे स्थल समेत पत्ता लागेन अन्य रोगले ग्रसित उनि अन्ततः कोरोनाका कारण मृत्यु ।
उनि पनि दिर्ग रोगि उनको सम्पर्कमा आएका र अन्तिम संस्कारमा जाने कम्तिमा पनि ५० जना खै त उनिहरुमा र उनलाई उपचार गर्ने र उनिसंग प्रतक्ष्य संम्लग्न भएकालाई पनि कोरोना पुष्टि भइसकेकाे छैन । अनि यो सर्छ कसरी
७. दैलेखको दुल्लु नगरपालिका खागितडाका ३५ वर्षीय पुरुष। पटांगिनी बजार दुल्लुको क्वारेन्टाइनमा ढलेर बेहास भई केही समयमा मृत्यु । स्वाब परीक्षणका क्रममा १७ जेठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
यि माथिका सबै कुराहरुमा केही न केही भम्र समेत छ । हामीहरु समेत केही भ्रममा छौं । यो कोरोना भाइरस कसैकसैकाे सरिरमा केही दिन रहेर समेत हट्ने कसैकोमा केहि छिन बसेर आफै हराउने खालको फ्लु पो हो की ?
यदि दिर्ग रोगीहरुमा यो परिक्षण गर्नेहो भने धेरैमा यो भाइरस रहेकाे देखिन सक्छ ।
परिक्षण गर्दा धेरैमा पत्ता लाग्ने परिक्षण नगर्दा पनि खासै विरामीकाे अबस्थाको बारेमा जानकारी नहुने यस भित्रका भ्रमहरु हामी समेत केलाउने कि ?